Iimpawu ezinokuthi zibonise ukuGuqulwa kweNtsingiselo | Ezezimali
Ukubakho kwii-equity akuyi kubakho khetho ngaphandle kokuthambekela. Inye ye iimfuno Ukusebenza kwizixhobo zemali. Kungenxa yokuba ukuba mkhuba kuya kwenza izinto zibe lula nokwandisa iintshukumo kwizabelo. Ngayiphi na imeko, elinye lamaqhosha ekufezekiseni ezi njongo kusekwe ekufumaneni utshintsho lwendlela ngesantya esithile. Iya kuba sisicwangciso esiluncedo kakhulu, ukuvula kunye nokulungisa isikhundla kwiimarike zezemali.
Ukwenza lo msebenzi ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi kube lula, uthotho lweempawu zenziwe ukuba iya kunika isikhokelo ngaphezulu kwesinye kwezi ntshukumo zeasethi yemali. Ekuqaleni kunokuba nzima ukubamba, kodwa ngokufunda ngokufanelekileyo kuya kuba nakho ukufikelela kweli candelo libalulekileyo lohlalutyo lobuchwephesha. Kodwa kuyo nayiphi na imeko baya kunika isikhokelo sokusebenza kwiimarike zezemali ngokhuseleko olukhulu. Nokuba kunamathuba amakhulu okuvelisa inzuzo ekhaya enye yemisebenzi eyenziweyo.
Ukusukela ngoku ukuya phambili, abatyali mali baya kuba noluhlu lwamaqhinga ukuze bazi ukuba zitshintsha phi ezi meko. Ayingomdlalo ohambelana ngokufanayo, kodwa ngokuchaseneyo zivela kubuchule obahlukeneyo botyalo-mali, njengoko uya kuba nakho ukuqinisekisa ukusuka ngoku ukuya phambili. Kuyakubaluleka kakhulu ukuba unike ingqwalaselo eyodwa kuba inxenye yotyalo-mali lwakho luya kuxhomekeka kwezi ngaphezulu kweemeko ezikhethekileyo eziphuhlisa iimarike zezabelo.
1 Umkhwa: izihloko eziqeshiweyo
2 Ukwahlukana kwenkxaso kunye nokumelana
3 Ukuphuhliswa kwesiganeko esingenakubonwa kwangaphambili
4 Ukugqitha kwimilinganiselo ehambayo
5 Kufuneka wenze ntoni kutshintsho lwendlela?
Umkhwa: izihloko eziqeshiweyo
Olunye lweempawu ezinokuthenjwa luvela kukwanda kwevolumu yokhuseleko olunikwe kwiimarike zezemali. Xa ziphezulu kunesiqhelo luphawu lomhlaba okuhlala kubonisa ukuba kukho utshintsho olubonakalayo kwimeko yezabelo ezidwelisiweyo. Ukuya kwinqanaba lokuba iya kusebenza njengesiqalo sokwenza ukuthengwa kwezabelo. Ngoncedo olukhulu lokuba ibonise indlela enobunzulu obukhulu ukuze iqhubeke nokuzinyusa. Ngokukodwa ukuba utshintsho kwindlela lubanjiwe ngexesha.
Ngokuchasene noko, utshintsho kwindlela, ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish, sisizathu esifanelekileyo sokushiya izikhundla kwiimarike ze-equity. Ukuze ngale ndlela, Ilahleko azifakwanga kwipotfoliyo yotyalo-mali esele uyenzile ukuza kuthi ga ngoku. Ayothusi into yokuba yiparameter enokukunceda uphephe iimeko ezingathandekiyo ukukhusela umdla wakho njengomtyali mali. Kuba, enyanisweni, banokuqhubekeka ixesha elide, nkqu neminyaka njengakwezinye iiasethi zemali.
Ukwahlukana kwenkxaso kunye nokumelana
La manani abaluleke kakhulu setha ithuba lokucaphula, ngandlel 'ithile. Kuba zibonisa ukuba izikhundla zabathengi zibekwe ngokucacileyo kubathengisi, okanye kungenjalo. Ngayiphi na imeko, kwaye nokufumana ukhuseleko olukhulu kwesi sithuba, kufuneka sikhatshwe kukunyuka kwevolumu yesivumelwano. Ukuba ukunganyangeki okubalulekileyo kugqityiwe ngokulula, inokuba sisisulu sokubonga okunokwenzeka kunye nokuqina kakhulu kumaxabiso abo.
Ngelixa kuchasene, oko kukuthi, ukuxhathisa akudluliswanga, iya kuba luphawu olucacileyo lobuthathaka bamaxabiso achaphazelekayo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba amaxabiso ehla aya kuqala, nkqu ukukhangela inkxaso elandelayo yokumisa ilahleko ngexabiso. Njengoko kusengqiqweni ukucinga kule meko, asizukubakho esinye isisombululo ngaphandle kokushiya ngokukhawuleza izikhundla ukuze ubenemali kwaye ukwazi ukuthenga izabelo, kodwa ngeli xesha ngamaxabiso aphantsi. Esinye sezifundo ezilula kakhulu ezinokufundwa kwimarike yemasheya. Nkqu nakubatyali mali abanamava amancinci kwiimarike ze-equity.
Ukuphuhliswa kwesiganeko esingenakubonwa kwangaphambili
Enye into ebangela ukuba olu tshintsho lwenzeke lubonakala kwisiganeko esifanelekileyo esinokuthi sitshintshe imeko ngokubanzi yentengiso yesitokhwe. Umzekelo, ukufika kwengxaki entsha yezoqoqosho, umahluko okrakra ekusetyenzisweni kwamazinga enzala okanye nakwipolitiki okanye isiganeko sentlalo ngokubaluleka okukhethekileyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba imeko yeekowuteshini itshintshe kakhulu kwaye ngamanye amaxesha igudle kakhulu. Konele jonga ukuvela kwemarike yemasheya Kule minyaka imbalwa idlulileyo yokuqaqambisa le nto iye yathatha isigqibo sokuqhuba utshintsho olwenziweyo.
Nangona kunjalo, ezi paramitha kufuneka zilinganiswe ngononophelo olukhulu kuba ukuthembeka kwazo akunamandla njengakwimeko zangaphambili. Kungenxa yokuba, kwimeko engaphezulu kwesinye inokubandakanya kuphela intshukumo ethile kwixabiso lesabelo. Ngokushukuma oko Zijolise ngokusisiseko kwelona gama lifutshane. Kodwa ngokungangqinelani ngokupheleleyo kumaxesha amade okusisigxina. Akumangalisi, ke, ukuba banokulahlekisa ngaxa lithile okanye kwelinye kwaye banokukhokelela ekusebenzeni ngendlela engeyiyo okanye ubuncinci kungacetyiswa.
Nangona kunjalo, iindaba ezibalulekileyo zenzeka phantse yonke imihla kwaye uninzi lwazo lunefuthe kumaxabiso eeasethi zemali. Nangona kunokwenzeka ukuba azonelanga ukutshintsha imeko yentengiso yesitokhwe. Le yinto ekufuneka uyicingele ukuba ungaziboni ukwenye imeko engafunekiyo. Nokuba yeyiphi indlela, kulungile ukuba uyigcine engqondweni xa ulungiselela ipotifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali. Awunakulibala ukuba naluphi na uhlobo lolwazi luhlala luxabiseke kakhulu, kwaye ngakumbi ngokubhekisele kwilizwe elinzima lemali.
Ukugqitha kwimilinganiselo ehambayo
Olunye umqondiso wokuba nayiphi na iasethi eyimali ekubonelela ngayo imalunga nokubaluleka kwamanyathelo ashukumayo otshintsho lwendlela. Akumangalisi ukuba, izehlo zayo zibe phezulu kwezinye kwaye ke kuya kufuneka uyazi le ntshukumo kwimizobo. Awungekhe ulibale ukuba le mimandla yamaxabiso inokwenziwa imvelaphi yoku kwahluka kwiindlela ezikhoyo esitokisini, kumacandelo nakwii-indices zesitokhwe. Ikwasebenza njengesiqalo sokumisela ngokusemthethweni ukuthengwa kunye nokuthengiswa, kuxhomekeke kwisicwangciso ngasinye.
Ngayiphi na imeko, sisicwangciso sotyalo-mali esinzima ngakumbi kunangaphambili. Phakathi kwezinye izizathu zokuba kutheni kufanele yiza nokufunda ngakumbi, kokubini ekufumaneni kwayo nakwiindlela zokwenza iintshukumo kwiimarike zezemali. Ukuya kwinqanaba lokuba kuyakuxabisa ngakumbi ukufezekisa ezi zenzo ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo. Apho abatyali-mali banamava ngakumbi ngabo baya kuba nethuba elincinci lokungenisa ezi modeli zohlalutyo.
Kufuneka wenze ntoni kutshintsho lwendlela?
Xa lo mzekelo ubonakala, awuyi kuba nesinye isisombululo ngaphandle kokungenisa uthotho lwezenzo ezona njongo zazo ziya kuba kukwenza ukonga kwakho kusebenze ngakumbi. Ukuze oku kube njalo, sinika apha ngezantsi izikhokelo ezinokuba luncedo kwimisebenzi yakho ukusukela ngoku. Kwaye oko kuya kuba koku kulandelayo.
Eli lixesha apho kufuneka yenza isigqibo, enye indlela okanye enye. Ngokukhawuleza kunye nokwazi iinjongo oziqhubayo. Ukuze ngale ndlela, ukwimeko ezingcono zokuhlangabezana neenjongo ezibekiweyo kwasekuqaleni.
Akufanele ucinge ukuba ziintshukumo ezingenakulungiseka, kodwa ubuncinci ukuba zikunike ukuthembeka okukhulu ukukukhokela kubo ukusukela ngoku. Unqabile ukuba uhambe kakubi ngolu hlobo lwesicwangciso-mali.
Isenokuba lixesha elifanelekileyo lokukhetha i imisebenzi enoburharha. Zombini ekuthengeni nasekuthengiseni, kuxhomekeke kuphawu lokwahluka kwendlela. Ngamathemba amahle kakhulu kwimidla yakho yobuqu.
Kuya kufuneka ukhethe ezo ngoma zilungele ukurhweba ngokulingana. Akumangalisi ukuba ezinye zazo unako ukulahlekisa ngomzuzu othile ebomini bakho njengomtyalomali omncinci nophakathi.
Naluphi na utshintsho kumkhwa luya kunceda Lungisa ipotifoliyo yakho yotyalo mali. Nokuba ngendlela eguqukayo ngaphandle kweemeko zentengiso ziyayifuna. Ngeendlela ezahluke ngokupheleleyo zotyalo-mali kwaye mhlawumbi zinokwahluka kwezinye iimeko.
Utshintsho kutyekelo kufuneka luthathwe njengokunyaniseka mathuba o shishino. Kungenxa yokuba, izindululo zentengiso yesitokhwe ziya kuhlala zivela apho unokwenza khona imali ngendlela enenzuzo ngakumbi kunangoku.
Ngenxa yokubonakala kwezi meko zintsha, akufuneki uzilinganisele ekuthengeni nasekuthengiseni izabelo kwintengiso yesitokhwe. Kodwa unayo ezinye iimveliso zemali apho unokwanelisa iimfuno zakho ngelizwe lemali. Iimali zotyalo mali, ukuthengisa ngetyala okanye iziqinisekiso zezinye zeemodeli ezifanelekileyo.
Ithuba elihle eliveliswe zezi ntshukumo kwimarike yemasheya kukuba zivumela abasebenzisi ukuba baxhamle phezulu amandla aphezulu Ngaphandle kwezinye iinkqubo. Njengokwazi indawo yexabiso apho kufuneka behlehlisile izikhundla zabo kwiimarike zemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Iimpawu ezinokuthi zibonise umva wokubuyela umva
Yintoni omele uyazi ngemali ye-fiat